Maalinta: Maarso 5, 2018
Ku dhawaad ​​hay'ad kasta waxay leedahay baaritaano joogto ah oo ku saabsan dhiirrigelinta iyo beddelka magacyada. Xarumaha TCDD, xaaladdan xitaa lama soo qaadin, xitaa xitaa isbeddelada sharciga lama sameyn karo. Wareysiga afka ah [More ...]
Mucjidka Metro ka yimid Raisalwasaaraha ilaa Konya
Gudoomiye ku xigeenka AK Party iyo Raiisel wasaare Binali Yildirim, xisbigiisa oo kuyaala Konya, 6 Golaha caadiga ah ayaa kahadlay. Yıldırım wuxuu ku dhawaaqay in qandaraaska qadka metrooga loo qorsheeyay in la sameeyo Konya in la qaban doono sanadkaan. Raiisel wasaare Binali Yildirim ilaa Konya [More ...]
Khadka Gawaarida ee Turkiga waxaa loo qaaday si xoog ah
Badbaadada nolosha waa la iska indhatiray meelaha qaar ee khadka sare ee korantada oo tamar siin doonta Konak Tramway. Egeli Sabah, degmada magaalo weynaha waxay qaadatay talaabooyinka lama huraanka ah markii arintu ay kor u qaadday dhibaatada gaadiidka ee bartamaha magaalada Izmir Metropolitan Dowlada Hoose. [More ...]
Baku-Tbilisi-Kars Tareenka Tareenka Kulan ayaa lagu qabtay Kars
Wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta Ahmet Arslan ayaa sheegay in Baku-Tbilisi-Kars Railway ay tahay mashruuc aad muhiim u ah oo ku wajahan geeska-galbeed si loo sameeyo isku socodka gaadiidka ee u dhexeeya Yurub iyo Aasiya mid aan kala go 'lahayn. Mashruuca Waddada Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars [More ...]
RayHaber 05.03.2018 Warbixinta Shirka
Wadarta Sabtiga Waxaa Iibsan Doonaysa (TÜLOMSAŞ) Adeegga Kirada Gawaarida Waxaa Iibsan Doona Algebra Waa La Iibin Doonaa
Agaasinka Guud ee ESHOT, kaas oo ku xiraya biyaha la isticmaalay intii lagu jiray maydhista basasaska dib-u-soo-celinta, waxay keydisaa 201 tan maalintii. ESHOT, oo isu diyaarineysa inay horumariso nidaamka ay ku adeegsato Buca Gediz, Çiğli iyo İnciraltı oo leh xarun cusub oo ah 6, [More ...]
Hoggaamiyaha sare ee waaxda Turkey ee dhoofinta, suuqa baabuurta ayaa saxiixay sannado cusub record 12. Dhoofinta 26 bilyan doolar warshadaha gawaarida ayaa kordhay 2,8 bishii Febraayo marka la barbar dhigo isla bishaas sanadkii la soo dhaafay [More ...]
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu ku dhawaaqay 2011, kaas oo shacabka loogu muujiyey “mashruuc waalan oo waadi ah waxaa shaaciyey Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan. [More ...]
76 ee Istanbul waxaa lagu dhisay aag ah nus milyan mitir oo labajibbaaran iyo 80 ayaa la dhammeeyaa. Dabbaaldeggii ugu horreeyay ee garoonka ayaa lagu dhawaaqay. TEKNOFEST ISTANBUL Diyaarad duulimaad, Space iyo Tiknoolajiyada ayaa lagu qaban doonaa garoonka cusub. [More ...]
Kuxigeenka CHP Kocaeli Tahsin Tarhan, Saldhigga Tareenka ee Kuruçeşme ayaa dib u galay codsi adeeg si loo soo jeediyo. Soo jeedinta Tarhan, waxay Muwaadiniintayada Kocaeli ku sugan yihiin labadaba waa kuwo la awoodi karo oo dhibaatooyin gaadiidka ah. [More ...]
Karşıyaka Nolosha Kale Ayaa Lahaayay Xadhigga
ka Mavisehir Karşıyaka Tareenka u raaco dekeda ayaa waxaa ku dhuftay macalin hawlgab ah Nuurcan Altay shalay. Haweeneydan 61-sano jirka ah, oo si yar looga soo saaray taraamka hoostiisa, ayaa loo qaaday isbitaal. Bishii Diisamber ee la soo dhaafay, Afet Soyer oo da'diisu ahayd 66 sano jir [More ...]
Dab-damisku wuxuu ka furmay Eskişehir
Eskişehir xalay, taraamka wuxuu istaagay rasaas ka timid gaari gudahiisa. Sida ay sheegayaan wararka uu helay qof aan la garaneyn, oo la sheegay in lagu xiray gaariga guduudan ee taraamka dhexdiisa joojiya xeryaha amniga [More ...]